Istudiyo esandula ukulungiswa kunye nekhitshi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela! Ifakwe kwindawo ethandekayo yaseDoe Mill kumgama wokuhamba weMeriam Park! Imizuzu nje ukusuka kwi-HWY 99, kufutshane neendawo zokutyela, iivenkile zekofu, kunye namaziko okuthenga. Uya kuba nendawo yokupaka yabucala ebonelelwe ngamanyathelo nje ukusuka kumnyango wakho wabucala. Iyunithi ixhotywe ngokupheleleyo ngezinto eziluncedo ezifana ne-wifi, iti, ikofu, iTV, iW / D, kunye neelinen ezongezelelweyo ukukhankanya ezimbalwa! Yiza uphumle kule ndawo iqaqambileyo, icocekile, ipholile! Ungalala ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu abadala!
Eli khaya liqaqambileyo nelipholileyo lisanda kulungiswa ngemigangatho yokhuni oluqinileyo, iikhabhathi ezipeyintiweyo, kunye nepeyinti entsha ngaphakathi nangaphandle. Yayilwa ngokuzola engqondweni, ukudala indawo enoxolo, efudumeleyo kunye neyokwamkela iindwendwe. Itafile yokutyela ingahlala ezine, emva kokupheka ekhitshini elifakwe ngokupheleleyo. Ukuba ubhukisha ngaphezu kweendwendwe ezi-2, i-sofa yokulala yobukhulu bokumkanikazi inelinen ezintsha ezinokuthi zenziwe ngaphambi kokufika xa uceliwe. Ukupakisha kunye nokudlala kuyafumaneka kwi-closet ene-hangers kunye nesithuba esaneleyo sempahla yeendwendwe. Nceda uzenze ekhaya!
Nje ukuba ungene kwindawo entle yaseDoe Mill, uya kuva i-vibe epholileyo. Amakhaya anqwenelekayo, izitalato ezinemithi, kunye neeyadi ezigcinwe kakuhle zenza uhambo olunoxolo lwakusasa ngelixa uphunga ikofu okanye iti.
Ipaki iMeriam ikumgama wokuhamba/ngebhayisekile (ngaphantsi kweemayile enye ukuwela ukudibana kweBruce Rd. kunye ne20th St.)
Baneziganeko ezininzi ezenzeka ngeveki. Ezi ziganeko zinokubandakanya iimuvi, iilori zokutya, umculo ophilayo, kunye nobusuku bamahlaya.
Jonga iwebhusayithi yabo ngolwazi malunga neziganeko ezizayo.
Ifakwe eMeriam Park ziivenkile ezahlukeneyo, zineendawo ezintsha nezizayo njengoko uluntu lukhula ngokukhawuleza. Esikuthanda kakhulu ukutya kunye nesiselo yikofu yeDaycamp. Ukujonga iiyure kunye nemenyu, ndwendwela iphepha labo le-Instagram @daycampcoffee.
IBaroni Park yipaki yethu yobumelwane kunye nebala lokudlala. Kukho isakhiwo sokudlala, iindlela zokuhamba, ibala elikhulu elinengca, kunye nenkundla yebhola yomnyazi. Ukuhamba kuthatha nje imizuzu embalwa. Thatha nokuba yiRoth St. okanye iMatson St. isingise eMantla ukuya eNgilani iSt. Cross eNgilani St. kwaye uqhubeke "kwiindlela zokuhamba" phakathi kwezindlu ezintle ezijongene. Isitalato ngasinye esihambayo sinesango elikhokelela kwiindlela zokuhamba ezijikeleze ipaki.
Indlela kaSteve G. Harrison Memorial Walking/Biking ibekwe ngaphaya kwesitrato sama-20. Njengoko uphuma ebumelwaneni ngeRoth St., yenza ekhohlo kwaye uwele umjelo wamanzi. Iya kuba kwicala lakho lasekunene.
Indawo yokupaka yabucala kunye ne-keyless, yokungena yangasese iqinisekisa ukungena ngaphandle koqhagamshelwano. Ikhowudi yephedi engundoqo iya kubonelelwa ngaphambi kokungena. Sihlala kwipropathi, kwaye njengoko istudiyo siphezu kwegaraji yethu, unxibelelwano lunokwenzeka. Sifumaneka ngefowuni ngayo nayiphi na inkxalabo okanye iimfuno zeendwendwe ezinokuba nazo.
Indawo yokupaka yabucala kunye ne-keyless, yokungena yangasese iqinisekisa ukungena ngaphandle koqhagamshelwano. Ikhowudi yephedi engundoqo iya kubonelelwa ngaphambi kokungena. Sih…